ရေကို မတ်တပ်ရပ်သောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး (၅) ခု - Myanmarload
ရေကို မတ်တပ်ရပ်သောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး (၅) ခု
လွန်ခဲ့သော ၆ နေ့ က 12:01 September 15, 2021
ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေအာလုံးဟာ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ရေဓာတ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိထားရမှာက ရေကို မတ်တပ်ရပ်သောက်ခြင်းကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးကတော့ ရေကို မတ်တပ်ရပ်သောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းရင် ရေတွေက အစာအိမ်နံရံတွေမှာ ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် စီးဆင်းစေပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ အစာအိမ်နံရံကို ထိခိုက်စေပြီး အစာမကြေတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
2. ကျောက်ကပ်မှ ကောင်းစွာမစစ်ထုတ်နိုင်ခြင်း။
ဒီလိုသောက်တဲ့အခါမှာ ကျောက်ကပ်က ကောင်းစွာမစစ်ထုတ်မှုနိုင်တဲ့အတွက် အညစ်အကြေးတွေက ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးအိမ်မှာ ကျန်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို များစွာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ရေကို မတ်တပ်ရပ်ပြီး မသောက်သင့်ပါဘူး။
မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်တဲ့အခါမှာ ရေဆာတဲ့စိတ်က ပျောက်မသွားပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရေသောက်တဲ့အခါ ထိုင်ပြီးသောက်တာက ရေဆာမှုကို ပိုပြီးပြေလျော့စေပါတယ်။
4. ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Acid level ကို မလျော့ကျခြင်း။
မတ်တပ်ရပ်သောက်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Acid level ကို မလျော့ကျစေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်ထိုင်ပြီး ရေသောက်တဲ့အခါတော့ Acid level ကို ပိုနှေးကွေးပြီး လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
5. အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်ခြင်း
မတ်တပ်ရပ်ပြီးရေသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အောက်ခြေအထိ ရေတောက်လျှောက်စီးဝင်သွားတဲ့ အတွက် အရိုးနှင့်အဆစ်အမြစ်များအတွက် မကောင်းပါဘူး။ ကြာလာရင်တော့ အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်ခြင်း၊ အရိုးများ ပျက်စီးလာခြင်း၊ အားနည်းလာခြင်းစတဲ့ ရောဂါများကြုံတွေ့လာပါတယ်။